नेपाली साहित्यमा असार–२९ सधैं बहस बनेर आउँछ । उक्त दिन ‘आदिकवि’ को उपाधि दिइएका भानुभक्त आचार्यको स्मृतिमा प्रायोजित दिवस मनाइन्छ । यो प्रायोजित दिवसले बौद्धिक बहसलाई फितलो बनाए पनि धेरैथोर ‘आदिकवि’ उपाधिबारे बौद्धिक जमातमा संशय जन्माइरहेको छ । यो लेखमा उक्त संशयबारे बहस गरिने छ ।
बालकृष्ण समले २०२५ सालमै भनेका थिए, ‘भानुभक्त ठूला कवि होइनन् । उनी आदिकवि पनि होइनन् ।’ (हेर्नाेस्, अन्नपूर्ण पोस्टको शनिबार विशेष, २०७६ असार २८) । विद्वान लेखकहरूले आजभन्दा करिब ५० वर्ष अगाडि नै भानुभक्तको ‘आदिकवि’ उपाधिबारे बहस शुरु गरेपछि सबैको ध्यान केन्द्रित गरेर निष्कर्षमा पुग्नु पथ्र्याे । ‘आदिकवि’ बहस थाँती नै रह्यो । बौद्धिक बहस हुनुपर्ने विषय किन थाँती राखियो, यतिबेला हामीसँग अनुमानमात्र छ ।
समको यो विद्वतासँग मेल खानेगरी ताना शर्माले करीब २५ वर्षअगाडि ‘भानुभक्तदेखि तेस्रो आयामसम्म’ (हेर्नाेस्, साझा प्रकाशन, २०५०, छैटौं प्रकाशन, पृष्ठ–४) पुस्तकमा लेखेका छन्, ‘वास्तवमा आदिकवि भनेर कसैलाई किट्नु नै अवैज्ञानिक हो । अनुसन्धानको ढोका थुन्दिनु हो । बाबुराम आचार्यजस्ता इतिहास मर्मज्ञबाट यस्तो विराम किन हुन गयो, आश्चर्य लाग्छ ।’ यसरी आश्चर्य हुने गरी किन भानुभक्त आचार्यलाई ‘आदिकवि’ उपाधि दिइरहेको छ ? शङ्काको दायरा फराकिलो हुँदै गएको छ ।
वास्तवमा हामीले ‘आदिकवि’ को औचित्यप्रति बहस गर्नै पर्छ । ‘आदिकवि’ को अर्थ ‘पहिलो कवि’ हो कि सम्मानको लागि सम्मानमात्र हो ? यो कोणबाट भानुभक्त आचार्यलाई दिइएको ‘आदिकवि’ उपाधिलाई हेर्न जरुरी छ । ‘आदिकवि’ को अर्थ नेपालको ‘पहिलो कवि’ भन्ने लाग्छ भने नेपालको पहिलो कवि घोषणा गर्न हतारिनु हुन्न ।
इतिहासमा भएका कमजोरीलाई पछिल्लो पुस्ताले सच्याएर जानुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नुपर्छ । ‘पहिलो कवि’ कै अर्थमा ‘आदिकवि’ लाई परिभाषित गरिएको हो भने त्यो परिभाषाप्रति बौद्धिक जमातबाट शङ्का उब्जिसकेको छ । यस्तो स्थितिमा कि त ‘आदिकवि’ भनेको नेपालको ‘पहिलो कवि’ कै अर्थमा नै हो भनेर प्रमाणित गरेर जान सक्नुपर्याे कि त ‘आदिकवि’ उपाधि ‘सम्मानका लागि सम्मान’ मात्र हो भनेर घोषणा गर्नुपर्ने देखियो ।
शङ्का वा प्रश्न उठिसकेपछि भानुभक्त आचार्यलाई ‘आदिकवि’ मान्ने विद्वत वर्ग वा राज्यसत्ताले त्यसको जवाफ दिनुपर्ने देखिन्छ । जवाफदेहिताबिना कोही कसैलाई सनक चढेकै भरमा घोषणा गरिएको ‘आदिकवि’ उपाधिलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने अनिवार्यता छैन ।
‘आदिकवि’ उपाधिबारे बहस हुनैपर्ने मुख्य विषय के हो भने हामीले अहिले नै भानुभक्त आचार्यलाई ‘आदिकवि’ (नेपालको पहिलो कवि) को रूपमा स्वीकार गरेर जाने हो भने नेपालको साहित्य क्षेत्रमा हुनुपर्ने अनुसन्धानको अन्त्य हुन्छ । नेपालको साहित्यिक इतिहास सम्पूर्ण रूपले अध्ययन गरेर प्रमाणित नभएकाले हतार गरेर भानुभक्त आचार्यलाई ‘आदिकवि’ घोषणा गरेर हतार त भएको छ नै उसैगरी इतिहासप्रति अन्याय पनि भएको छ । नेपालको साहित्यिक इतिहासको अनुसन्धान हुन बाँकी छ, भएका अनुसन्धान प्रमाणित हुन बाँकी छ ।
यस्तो तरल अवस्थामा अनुसन्धानको पाटोलाई प्रभावित पार्ने गरी ‘आदिकवि’ उपाधिको निरन्तरतामा अडिग हुनु वा उठेका प्रश्नलाई नसुनेजस्तो गर्नु बौद्धिक दिवालियापनको नमूना हो । विश्व साहित्यमा प्रभाव राख्ने बेलायतको साहित्यिक अभ्यासमा उनीहरूले ‘आदिकवि’ घोषणा गर्ने हतारो गरेका छैनन् । बेलायतीहरूले ‘आदिकवि’ शब्दावली प्रयोगको सट्टामा ‘पत्ता लागेको सबैभन्दा पुरानो कवि’ भनेर प्रयोगमा ल्याएका छन् । त्यसैले उनीहरू सबैभन्दा पुरानो कवि खोज्दै सातौं शताब्दीसम्म पुगेका छन् । र, ‘क्याडमन’ लाई ‘पत्ता लागेको सबैभन्दा पुरानो कवि’ मानेका छन् । बेलायतको साहित्यिक खोज अनुसन्धानले क्याडमनभन्दा अगाडिको ‘विड्विथ’ ‘डेओर’ र ‘वेओल्फ’ जस्ता कविताहरू भेटेका छन् । तर, कवि पत्ता लगाउन नसकेपछि क्याडमलाई नै ‘पत्ता लागेको पुरानो कवि’ घोषणा गरेका छन् । नेपाली साहित्यमा एकाएक ‘आदिकवि’ तोकिदिएर अनुसन्धानको पाटोलाई अन्त्य गरिदिनु आफँैमा आश्चर्य भएको छ ।
मोतीराम भट्टले जुराइदिएको ‘आदिकवि’ उपाधिले नै भानुभक्तलाई ‘नेपालको पहिलो कवि’ को रूपमा व्याख्या गर्न थालिएको छ । यो व्याख्याले भानुभक्त आचार्यलाई ‘आदिकवि’(?) हुने सम्भावना दिए पनि नेपालको साहित्यिक इतिहास १८ औं शताब्दीको अन्त्यतिरभन्दा अगाडि जान सक्दैन । त्यसैले ‘आदिकवि’ उपाधि घोषणा नेपाली साहित्यको आकाश खुम्च्याउने उपमा बनेको छ । नेपालको प्रमाणित इतिहासले भन्छ, १८ औं शताब्दीको शुरुवाततिर मल्ल राजाहरू ‘कवि’ थिए । ‘कविराज’ उपमा पाएको जयप्रकाश मल्ल नेपालको प्रमाणित इतिहास हुन् । कमसेकम हामी जयप्रकाश मल्लसम्म पुग्न सक्यौं भने पनि नेपालको साहित्यिक इतिहास अलिक पुरानो देखिन्छ ।
मोतीराम भट्टले बहस र कुनै प्राविधिकपन बिना ‘आदिकवि’ उपाधि दिएको विषयलाई भानुभक्त आचार्य मरेको करिब ७२ वर्ष पछाडि ‘आदिकवि’ उपाधि सरकारी तवरबाट घोषणा हुनु राज्यसत्तामा रहने र भानुभक्त आचार्यको सांस्कृतिक, सामाजिक र धार्मिक पृष्ठभूमि एउटै थियो भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ ।
जुद्ध शमशेरलाई चढाएको यो बिन्तीपत्रबाट थाहा हुन्छ, ‘तलब भत्ता केही दिनुपर्ने होइन, एउटा इज्जतसम्म हो, त्यो पनि मरिसकेको बाहुनलाई ।’ त्यसैले श्री ३ जुद्ध शमशेरले भानुभक्त मरेको ७२ वर्षपछाडि वि.स. १९९७ मा लालमोहरमार्फत् ‘आदिकवि’ घोषणा गरे ।
संशय त ‘आदिकवि’ उपाधि दिने मोतीराम भट्टप्रति पनि छ । मोतीरामले भानुभक्तलाई दिएको उपाधिको सूची निकै रोचक छ । वि.स. १९४१ मा ‘बालकाण्ड रामायण’ प्रकाशित गर्दा मोतीरामले भानुभक्तलाई ‘प्राचीन कवि’ उपाधि दिएका थिए । यसैगरी, वि.स. १९४८ मा ‘भानुभक्ताचार्यको जीवनी’ प्रकाशित गर्दा उनै मोतीराम भट्टले ‘आदिकवि’ उपाधि दिएका थिए । यी उपाधिबाहेक स्वयं मोतीराम भट्टले भानुभक्तलाई ‘कविराज’, ‘सहज कवि’, ‘कवि चक्रचुडामणि’, ‘रसिक कविभिलाषी’, ‘हिमाल गिरी निवासी’, ‘बुद्धिमान यथार्थवक्ता’ जस्ता उपाधि दिएका थिए ।
उपाधिहरू सर्वस्वीकार्य हुनु जरुरी छ । सर्वस्वीकार्य हुन बहस वा छलफल हुन जरुरी छ । ‘वादेः वादेः जायते तत्वबोध’ भन्ने संस्कृतको श्लोकजस्तै तर्क र तथ्यको आधारमा निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने अवस्थामा अझै पनि भानुभक्त आचार्यलाई नेपालको पहिलो कवि भन्ने अर्थ लाग्ने गरी ‘आदिकवि’ उपाधिकै निरन्तरतामा राख्नु साहित्यिक इतिहासप्रतिको अन्याय हो । त्यसैले ‘आदिकवि’ उपाधिमा स्वस्थ र बौद्धिक बहस गर्न आवश्यक छ ।